DOWNLOAD XSPLIT BROADCASTER ỌHỤRỤ MBIPUTE - MMEMME NYOCHA - 2019
Mgbasaozi XSplit 3.3.1803.0508
Mgbasa ozi XSplit bụ ngwaahịa software maka mgbasa ozi TV na TV, na Twitch, Facebook Live na YouTube. Otu n'ime ihe ngwọta kachasị mma nke ụdị ya. Ngwaọrụ a na-enye gị ohere iwepụta vidiyo site na ese foto ejikọrọ na PC ma jikọta iyi ahụ na nchịkọta ihuenyo. N'iji ya tụnyere ihe omume dị iche iche Xsplit Gamecaster, ụlọ ọrụ a dịkwuo. Na-enye ọrụ zuru oke nke na-enye gị ohere ijide ihe na ngosi, ma dezie vidiyo dị. Ntọala di elu ga - enyere gị aka itinye ọnụọgụ ndị dị mkpa maka mmiri ziri ezi.
A na-emepụta atụmatụ nke usoro ihe a n'ụzọ dị mma. Ọ bụ ihe omimi ma ọ ga-esiri gị ike iji arụmọrụ ahụ. Na nnukwu ngọngọ, a gosipụtara ngosipụta nke vidio ahụ. A na-arụgharị ntụgharị ihu na mpaghara ala dị ala. A ga-ahụkwa mpaghara niile nke ọhụụ ọ bụla na ngọngọ kachasị.
Ngalaba a na-enye usoro ntọala ebe ịchọrọ ịkọwa kpọmkwem ebe mgbasa ozi ga-eme. Usoro ntinye vidiyo dị n'ọtụtụ ebe eji akara (x264). Na taabụ na ọnụọgụ abụọ ị nwere ike ịhazigharị nrụpụta mkparịta ụka - mgbe niile ma ọ bụ agbanwe bitrate. Mgbe ị na-akọwa àgwà nke multimedia, ọ dị mkpa icheta na ọ dị elu karị, ibu ibu na nhazi ahụ.
O kwere omume imezi mkpebi ahụ, ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gosipụta ihe dị ala nke oke a na vidio mgbasa ozi. Ọbụna na ntọala ahụ, ịnwere ike ịgbanwe ike mkparịta ụka na ibu ọrụ CPU (usoro ihe omume ahụ ga-agwa gị n'ụdị ikpe eji eji).
Na ngalaba "Lee" a na-emezi ntọala ndị a na-ewepụ. Akụkụ vidiyo ga-akọwapụta ya, na-eburu ike nhazi na ike njikọ Ịntanetị. Ị nwere ike ịgbanwe nọmba nke okpokolo agba kwa nkeji. Mgbanwe dị n'etiti ọnọdụ na-emepụta mmetụta dị mma. Iji oke "Ọsọ ọsọ" mee ka ọsọ ọsọ n'etiti ọnọdụ. "Onye nrụpụta" na-enye gị ohere igosipụta ntụgharị nsụgharị nke iji otu n'ime ndị nyocha nke onye ọrụ ahụ.
Mgbe mgbasaozi na-ebi na windo oghere, ị nwere ike ịhụ ihe niile ị chọrọ. Ohere nwere ike ịgụnye ndị na-edebanye aha ndị na-ekiri ma ọ bụ ndị na-ekiri, na ihe a niile na oge. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkụzi ihe karịrị otu egwuregwu, nhọrọ a na-enye ọnụọgụ nke na-emepụta ihe nkiri, nke a na-akpọ "Ọhụụ" ma nyefee usoro nchịkọta.
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ụda sitere na igwe okwu ma ọ bụ ngwaọrụ mmepụta na-adabere, dabere na ihe akọwapụtara na ntọala maka iji. Ị nwere ike ịmepụta logo site na ịhọrọ akara ngosi ma ọ bụ onyinyo ma dezie ya na nhazi ọrụ.
Usoro a n'oge iyi na-egosiputa ozi gbasara ndị debanyere aha ọhụrụ. Iji mezuo ọrụ dị otú a, a na-eji ọrụ ncheta onyinye. Mgbe ị na-enye aka na saịtị ahụ, enwere njikọ maka OBS na XPlit na nrịbama. Ndị ọrụ ya na-edegharị, ma na-eji njedebe "Webpage URL" tinye ya na mpaghara ọrụ nke usoro ihe omume ahụ.
Mgbe ọrụ ndị gara aga, windo ahụ egosiri na ọ dị mfe ịkwaga ebe ị na-enwe ntụsara ahụ. Ntuziaka inye onyinye na-enye gị ohere ịnwale ngosipụta nke foto na ntanetị gị. N'ikpeazụ, ịhọrọ nhọrọ nhọrọ Youtube, usoro ahụ ga-achọ nbanye gị na channelụ.
N'oge mgbasa ozi nke omume ha, ọtụtụ ndị na-ede blọgụ vidio na-egosipụta vidio na-abanye na kamera na iyi. Na ntọala enwere nhọrọ nke FPS na usoro. Ọ bụrụ na ị nwere igwefoto HD ma ọ bụ karịa, ị nwere ike ịhazi àgwà vidiyo. Ya mere, dị ka omume na-egosi, ị nwere ike ịdọta ọtụtụ ndị na-ekiri iji hụ TV.
Ebe ọ bụ na vidiyo nchịkọta Youtube na-enye gị ohere ịgbasaa 2K vidiyo na 60 okpokolo agba kwa nke abụọ, iyi ahụ chọrọ ụfọdụ ntọala. Nke mbụ, na window window, ị ga-etinye ozi gbasara isiokwu nke mgbasa ozi na-ebi ndụ, aha. Ịnweta ndị na-ege ntị, ihe ngosi nke a na-arụzu, nwere ike ịmeghe ma mechie (dịka ọmụmaatụ, naanị ndị debanyere aha ya). Site na FullHD mkpebi, a na-atụ aro ka ị jiri ọnụego ntakịrị hà 8920. Enwere ike ịhapụ ntọala egwu ugbu a n'enweghị agbanwe agbanwe.
Usoro ihe omume ahụ na-enye ịchekwa iyi ahụ na diski mpaghara, nke dị mfe, ebe ọ bụ na a maara na ndị na-ede blọgụ na-ewu ewu na-ebipụta ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbasa ozi niile na ọwa ha n'ọdịnihu. Ndị mmepe na-akwado iji nwalee bandwit na windo ahụ iji zere ngosipụta nke igwe na ihe oyiyi.
E nwere nsụgharị abụọ nke ngwaahịa software a tụlere: Personal na Premium. Dị ka ọ dị, ha dị nnọọ iche na ibe ha, dị ka aha ha na-agwa anyị banyere ya. Mmadụ onwe ya kwesịrị ekwesị maka ndị na-ede blọgụ ma ọ bụ ndị ọrụ na-enwe afọ ojuju na setịpụrụ atụmatụ nke usoro ihe omume ahụ. Atụmatụ nke mbipute a dị ntakịrị, ya mere, mgbe ịdekọ vidio karịa 30 FPS, aha ga-apụta na akuku "XSplit".
Enweghi uzo vidio na enweghi usoro di elu. Ndị na-ede blọgụ vidio ọkachamara na-eji ya eji eme ihe, dịka ọ nwere otutu ihe ederede na multimedia. Ndepụta adịghị egbochi gị ịhọrọ ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nkeji. Okwesiri iburu n'uche na site n'inweta ikikere a, onye n'ahia nwere ike iji XSplit Gamecaster, nke nwere ihe meghariri.
Na-agbakwụnye ozi banyere ndị na-ege ntị n'oge mgbasa ozi ahụ;
Na-agbanwe oge dị n'etiti ebe.
Ụdị ọnụahịa dị oke ọnụ nke ndenye aha ịkwụ ụgwọ;
Enweghị njikọ asụsụ Russian.
N'ihi Xsplit Broadcaster, ọ na-adaba iduzi mgbasa ozi ndụ na ọwa gị, mgbe ịmechara mgbanwe ndị dị mkpa. A na-ejide na kamera weebụ ga-enye aka nye vidiyo gị dịgasị iche iche. Ọrụ dị mfe nke ịlele ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekiri mmiri ga-enye gị ohere ịhụ omume niile na nkata ahụ, yana ịza ajụjụ ndị debanyere aha. Mgbasa mgbasa ozi na elu mkpebi ma gbanwee n'etiti ọnọdụ dị iche iche na-egosi ịdị irè na ọdịdị nke ngwaahịa a.
Download mbipụta nke XSplit Broadcast
YouTube ngwanrọ ngwanrọ Gaa mmemme na Twitch OBS Studio (Open Broadcast Network) Razer Cortex: Gamecaster
Mgbasa ozi XSplit bụ usoro maka mgbasaozi na Youtube. Igwe ngwanrọ na egosiputa ọnụ ọgụgụ nke ndị na-ekiri ma mee ka o kwe omume iyi vidiyo na FullHD.
Onye Mmepụta: XSplit
Ọnụ: $ 400